वीर, थापाथली र कान्ति अस्पताल जाँदा अब लाइन बस्नु नपर्ने
वीर अस्पताल, परोपकार तथा प्रसूति गृह थापाथली र कान्ति बाल अस्पताल महाराजगञ्जमा जचाउनको लागि अब बिरामीले अब लाइनमा बस्नु नपर्ने भएको छ । ती अस्पतालले बुधबारदेखि टोकन प्रणाली लागू गरेकाले लाइन लाग्ने झन्झन्टबाट विरामीहरु मुक्त भएका छन् । यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।
अघिल्ला नौवटै अनशनका क्रममा डा. गोविन्द केसीका पक्षमा उभिएका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का नवनियुक्त डिन डा. केशवप्रसाद सिंह दसौं अनशनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन पुगेका छन् । यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्तिलगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि
सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सेक्स होइन रोमान्स गर्नुहोस् !
प्रेमसम्बन्धमा रोमान्स कति आवश्यक छ ? सायद तपाइँलाई यो प्रश्नको उत्तर कसैले पनि बताउन नसक्ला ।
यो कुरा केवल तपाइँ र तपाइँका पार्टनरबीचमा मात्र निर्भर हुने कुरा हो । कतिपय मानिसहरुले जोस तथा प्यासनले सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने ठान्छन् भने कतिले आत्मीयतालाई प्राथमिकता दिन्छन् ।
खर्च नहुँदा अस्पतालले पनि हेरेन
घरेलु हिंसामा परेकी रोल्पा थवाङ-८ की ४८ वर्षीय सुनकुमारी नेपालीको बेलैमा राम्रो उपचार हुन नपाएपछि भैरहवामा उपचार गर्दा गर्दा मृत्यु भएको छ।
भैरहवास्थित युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै शनिबार साँझ उनको मृत्यु भएको हो।
सुनकुमारीलाई गचत असोज २६ गते पति ध्रुव नेपाली र बहिनी नाता
स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीले तालिम अवलोकन भ्रमण तथा गोष्ठीका नाममा एक वर्षमा पाँच सय २० पटक विदेश भ्रमण गरेका छन् । विभिन्न देश र दातृ निकायले आयोजना गरेका कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि विभिन्न तहका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो खबर हामीले आजको
दमकमा पुनः डेंगुको संक्रमण, जनस्वास्थ्यले लापरबाही गरेको जनगुनासो
दमक । दमकमा फैलिएको डेंगु रोगको महामारी नियन्त्रण गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाले कुनै पहल नगरेको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयले आज दमकमा आयोजना गरेको डेंगु चिकेन गुनिया जिका तथा अन्य किटजन्य रोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीले डेंगु रोग नियन्त्रण
पूर्वाञ्चलमै पहिलो पटक मूत्रथैलीको सफल शल्यक्रिय
पथरी । विराटनगर–३ स्थित नेसनल किड्नी अस्पतालले पूर्वाञ्चलमै पहिलो पटक बिरामीको ट्युमर भएको मूत्रथैली निकालेर नयाँ मूत्रथैली बनाउन सफल भएको छ ।
अस्पतालले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सप्तरी जिल्ला हनुमाननगर योगिनीमाई –४ का ४४ वर्षीय सुरेन्द्र मिश्रको मूत्रथैलीमा भएको ट्युमर निकालेर
धरानमा डेङ्गु देखियो, बिरामी थपिँदै
इटहरी l देशका विभिन्न स्थानमा डेङ्गु फैलिरहेका बेला धरान–१६ की १३ वर्षीया जीना राईमा पनि पोजिटिभ देखिएको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बताएको छ।
डेङ्गुपीडित राईको पेडियाट्रिक विभागमा उपचार भइरहेको प्रतिष्ठानको आकस्मिक सेवा विभागले जानकारी दिएको छ। डेङ्गु
भारत सरकारले आफ्नो देशमा चलनचल्तीमा रहेका ५ सय र १ हजारका नोट प्रयोग बन्द गरेपछि नेपाली बिरामी समस्यामा परेका छन् ।
भारतका अस्पतालहरुले कात्तिक २३ गतेबाट उक्त नोट लिन नमानेपछि भारतमा उपचार गर्न आएका बिरामीहरु समस्यामा परेका हुन्। यो खबर हामीले आजको कारोबार दैनिकबाट लिएका हौ।
मोरङ .l उर्लाबारी क्षेत्रमा डेङ्गुबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ । उर्लाबारी–६ स्थित मङ्गलबारे अस्पतालका अनुसार थप एक जना पथरी शनिश्चरे–८ का विक्रम सुनारलाई डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि यस क्षेत्रमा डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच पुगेको हो ।
यसअघि उर्लाबारी–१ की रामकुमारी